Waa maxay qaanso roobaad qaawan sidee loo sameeyaa | Saadaasha Shabakadda
Waxaan horey u ogaanay in dabiicigu yahay wax aan caadi aheyn oo na tusi kara ifafaalo aan caadi aheyn iyo dhacdooyin qurux badan leh. Xaaladdan oo kale, waxaynu ka hadlaynaa dhacdo ku dhacda jawiga loo yaqaan qaanso roobaad dabka. In kasta oo magacani waxyar ka qaldan yahay waxa uu dhab ahaan muujinayo, haddana waa ifafaale u muuqda mid cirka ku shareeraya oo soo saara mosaics aad u qurux badan. Waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca arches-horizontal. Waa magac u eg in ka badan inta uu ka tarjumayo. Mosaics-ka ay sameystaan ​​ayaa ah midabo aad u qurux badan. Si kastaba ha noqotee, su’aasha la isweydiiyo in ka badan hal ayaa ah, sidee ayey u sameysan yihiin iyo sabab?
Hagaag, qodobkaan waxaan kusoo bandhigeynaa dhamaan sirta qaanso roobaadka dabka. Waxaan kuu sharxi doonaa sida loo sameeyay iyo sababtee.
2 Sababta qaanso roobeedka dabka
3 Nooca daruuraha cirrus
4 Xagee ka arki kartaa qaanso roobaadka dabka
In kasta oo ay tahay ifafaale u eg qaansoroobaad caadi ah, haddana ma aha wax la mid ah sababaha samayska iyo asal ahaan asal ahaan. Waa macquul in, intaad nooshahay, aad aragtay in kabadan hal jeer. Waxay yihiin xarigyo qurux badan oo midabbo kala duwan leh laakiin waxay la mid yihiin kuwa qaansoroobaadyada caadiga ah. Midabadan waxaa lagu saleeyay iftiinka daruuraha gudbiya daruuraha cirrus. Tani waxay abuureysaa nooc saadaal midab ah oo ku wareegsan amalgam chromatic ah oo ka shaandheeya daruuraha.
Haddii aad waligaa si toos ah u fiirsato dhacdadan oo aad sawirto, waxay u badan tahay inay ku siiso sawirro ka wanaagsan kan qaansoroobaad ee dhaqameed. In kasta oo aysan lahayn sabab la mid ah samayska mana u eg qaansoroobaad dhab ah, waxaa loo yaqaan qaansoroobaad dab maxaa yeelay waxay dhacdaa maalmo aad u qalalan. Intaa waxaa sii dheer, waxay la mid tahay isku-dhafka midabka iyo ahaanshaha maalmaha qalalan. Saamaynta kaliya ayaa ah inaysan u baahnayn roob inuu soo baxo. Saamaynta iyo muuqaalka ay leeyihiin ayaa ah olol ololaya oo lagu arki karo daruuraha hufan.
Sababta qaanso roobeedka dabka
Waxaan si tartiib tartiib ah u sharaxi doonaa maxay yihiin sababaha iyo sababaha qaanso roobaadka dabka loo sameeyo. Kuwani qaanso-wareeg ah waxay leeyihiin asal ahaan daruuraha cirrus. Halos waa wax caan ku ah nolol maalmeedkeena waxayna ka sameeyaan muuqaallo qurxoon cirkeenna. Iyagu waa wareegyo iftiiminaya oo midabbo kala duwan leh mararka qaarkoodna ku xeeran qorraxda ama dayaxa meelaha qaarkood. Munaasabadahaas waxaa lagu arkaa iyaga oo leh taaj muuqaal ah oo gudihiisa ka mugdi badan yahay cirka ku xeeran. Halos-yadan waxaa sameeyay ciyaaro kala duwan oo iftiin ku dhex jira waxa ku dhaca dabeecadda.
Hagaag, markaan ku darno midabada qaansoroobaad halo caadi ah oo aan ka jarno saameynta indho la'aanta ah ee qorraxda ama dayaxa, Waxaan heli karnaa qaanso-wareegsan ama si fiican loogu yaqaan qaanso roobeedka dabka. Dhacdadan waxaa lagu arki karaa dhibaato la'aan marwalba maadaama qorraxdu aysan joogin si aysan kuu oggolaan inaad toos u eegto. Waan ognahay in fiirinta qorraxda ama hareerahaaga waqti dheer ay waxyeelo u yeelan karto retinas-keena. Waxa jira xaalado dad gabi ahaanba indho beelay oo ay aad u dheraystaan ​​qorraxda.
Qeybtaan midabada kala duwan leh waxaa lagu sameeyay dherer waxaana u baahanahay xaalado gebi ahaanba aan laga gudbi karin. Hal shay, qorraxdu waxay u baahan tahay inay qiyaastii 58 darajo ka sarreyso xarriiqda jihada. Waxaan u baahanahay qadar wanaagsan oo daruuro cirro ah oo cirka ku jira oo kala firdhin kara iftiinka. Daruurahan ayaa dhererkoodu dhan yahay 8 km waxayna ku kala baxaan safaf dhaadheer oo dhuuban. Thanks to daruurahan, muuqaalka muuqaalka mawduucyada cad waxaa laga soo saaray asalka buluuga daran. Haddii aan ku darno midabada qaansoroobaad muuqaalkan quruxda badan, waxaan lahaan doonnaa wax gebi ahaanba cajiib ah.
Nooca daruuraha cirrus
Si loo sharxo farqiga u dhexeeya qaansoroobaadyada caadiga ah iyo qaansoroobaad ee dabka, dabeecadda daruuraha cirrusku waa aasaas. In kasta oo ifafaalaha ugu horreeya uu yahay natiijada ka dhalaalka iftiinka qoraxda ee dhibcaha dhibcaha ee wali ku xanniban jawiga, qaanso-wareegayaasha wareega waxay u baahan yihiin cimilo qalalan. Cimiladan qalalan waxay u sabab tahay baahida loo qabo qaar ka mid ah jajabyada barafka laba-geesoodka ah ee saxda ah ee lagu qariyay daruuraha cirr. Sidaas darteed, aad ayey muhiim u tahay in la ogaado qaabka iyo dabeecadda daruuraha noocan ah.
Waa ku mahadsantahay qaabka kristantiyadan yaryar ee barafka ah in falaadhaha qorraxdu ay ka tarjumi karaan oo ay ku faafi karaan daruuraha wareega, iyagoo samaynaya qaanso dhaadheer oo midabbo ah. Mararka qaar qaansooyinkani waa kuwo aad u dheer oo ay awoodaan inay ku fidiyaan dhammaan muuqaalka muuqaalka ee booskeenna. Qaab-dhismeedku waa mid la yaab leh oo u gaar ah sababahan soo socda. Wax kasta oo aan soo sheegnay, waa inaan ku darnaa hal qodob oo kale. Waxay tahay in walxaha barafka ay tahay inay kudhawaadaan meel jiif ah marka loo eego xiriirka falaaraha qorraxda. Haddii kale, ma jirin waddo lagu ballaariyo nuurkan iyada oo loo marayo daruuraha cirro.
Tani waxay ka dhigan tahay, inta badan waqtiyada aan aragno qaansoroobaad qaanso ah, muddadeedu aad bay u gaaban tahay. Xaaladahan dalbanaya waxay jiraan oo keliya in muddo ah. Qorraxdu way sii socotaa dhicitaanka iyo xagasha leh kiristaaloda barafka hadda wixii ka dambeeya lama mid aha inay muujiso.
Xagee ka arki kartaa qaanso roobaadka dabka
Hadda markaan falanqeynay tababbarka iyo sababta keentay, waxaan sharrax ka bixin doonnaa meelaha adduunku ka dhacayo iyo goorta ay u badan yihiin. Si aad u aragto waxaad u baahan tahay meel cimilo qalalan leh oo qorraxdu tahay 58 digrii ama ka hooseysa. Haddii aad tagto waddamada Waqooyiga Yurub, marar dhif ah ayaad arki doontaa mid ka mid ah oo aad u qurux badan.
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee lagu arko tan waa Mexico City ama Houston. Isbaanishka waxaan ku haynaa war xun, waxaan aad ugu fogaa waqooyiga si aan u aragno.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkani u adeego in laga barto qaanso roobaadka dabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Qaanso roobaad dabka